Waa guddi alwaax injineernimo ku shaqeeya, gaar ahaan ku habboon in loo isticmaalo warshadaha dhismaha ujeeddooyin qaab dhismeed ama aan qaab-dhismeed lahayn.
ROCPLEX xirxirida plywood waa plywood xirxiraan leh tayo sare leh oo lagu dabaqi karo, waxaa si balaaran loogu isticmaalaa sariirtaada, sanduuqa wax lagu rakibo, dhisida darbiga kuxiran, iwm.
ROCPLEX Waxqabad sare oo waara oo alwaaxa, ROCPLEX's Laminated Veneer Lumber (LVL) alwaaxyada, madaxyada iyo tiirarka ayaa loo adeegsadaa codsiyada qaabdhismeedka si loogu qaado culeysyo culus oo miisaanka ugu yar leh.
ROCPLEX HPL waa qalabka dabka ka hortaga ee qurxinta dusha sare, oo ka sameysan warqad kraft ah oo hoos timaada habka miisaanka melamine iyo phenolic resin. Maaddada waxaa lagu sameeyaa kuleyl iyo cadaadis sarreeya.
ROCPLEX Pine plywood caadi ahaan waa badeecad tayo sare leh oo ku imaaneysa 4 ′ x 8 ′ laba dhinac oo leh dhinacyada darajooyinka badda oo dhumucdoodu u dhexeyso ⅛ ”ilaa 1 ″.
ROCPLEX foorarsiga qaabeynta plywood aad rabto.
Kudar naqshad cusub mashruucyadaada alwaaxda leh ROCPLEX Bending Plywood.
Filinka Rocplex Antislip Oo Plywood Ku Wajahan
ROCPLEX plywood antislip waa 100% adag plywood birch dahaarka leh waarta, warqad-adkeysi iyo adag xirtaan daaha filim phenolic biyuhu.